कस्तो बन्यो संजय दत्त बायोपिक ‘संजु’ को ट्रेलर ? पुरा रिपोर्ट सहित (हेर्नुहोस भिडियो)!! - Experience Best News from Nepal
कस्तो बन्यो संजय दत्त बायोपिक ‘संजु’ को ट्रेलर ? पुरा रिपोर्ट सहित (हेर्नुहोस भिडियो)!!
लामो समय यता बलिउड स्टार रंबीर कपूर चलचित्र ‘संजु’का निम्ति लागि परिरहेका छन् केहि साता आघि चलचित्रको टिजर सार्बजनिक भयो र नेपाली सामाजिक संजालमा समेत ट्रन्दिंगमा पर्न सफल बन्यो । चलचित्र बलिउड स्टार संजय दत्तको जिबनीको आधारलाइ मणि निर्माण भएको हो। वलिउड हस्ती संजय दत्तको जिबन चलचित्र देखि कार्यकाल कस्तो थियो भन्ने कुरा यस चलचित्रमा चित्रण भएको छ । उनले झुट देखि सच्चाईसम्म विभिन्न रुप र संघर्ष संग जुद्नुको साथै भोघाईलाइ नितान्त बिस्मात रुप दियिएको छ ।
संजयको जिबनीलाइ हेर्ने हो भने उनको जिबनको यात्रा उनको पारिवारिक चलचित्र देखि नै सुरु भएको बुज्न सकिन्छ साथै उनि पनि बलिउडका एक स्टारका रुपमा प्रस्तुत हुन पुगे । यस पश्चात नै आफ्ना सुनौला साथै अन्धकार जिन्दगीको अनुभूतिहरु बनाए जस संगै उनले सम्मान पाउनुका साथ साथै अनेकौ यातना साथै झैँझगडाको सामना गर्न पुगे।
उनले ग्यांगस्टारको जिबनकाल देखि लिएर माया र प्रेमको वियोग साथै आतंकबादी भएको खुलाशा र भ्रमको साथ् बिताएका जेल सजाए इत्यादी उनको जिबनीको प्रतिफल रहेको बुजिंछ।
‘संजु’ वलिउडको यस्तो चलचित्र हो जसमा एक ब्यक्ति जसमा माया, सम्मान, सदभावना, झगडा र आफ्नै जिबन यापनको निम्ति गरेको संघर्षको बिषयलाइ निस्फिक्री रचिएको ठटेउली र मोटिभेशन बोकेको संजय दत्तको जिबन कहानी हो ।
संजय दत्तको जिबन कालमा भएका एक एक कार्य र यात्रालाइ मन्द भाषामा यसै चलचित्रमा द्रस्त्युना खोजिकेको छ । चलचित्रको मूल चित्र भनेकै संजयको जिबनकाल हो।
चलचित्र संजु मल्टीसतरले भरिएको छ, चलचित्रमा मुख्य भूमिका ‘संजय दत्त‘को भूमिकाका उभिएका छन् बलिउडकाइ स्टार रंबीर कपूर साथै चलचित्र परेश रावल , मनिषा कोइराला, अनुष्का शर्मा, सोनाम कपूर , दिया मिर्जा , विक्की कौशल , जिम सर्भ , बोमन हिरानी इत्यादी कलाकारहरुको साथ् रहेको छ । राम्रो परिवेश बोकेको यस चलचित्र राम्रो बनेको कुरा बुज्न सकिन्छ ।
चलचित्रको निर्देशन राजकुमार हिरानी रहेका छन् भने निर्माणमा विनोद चोपरा र राजकुमार हिरानी फिल्म्स रहेको छ ।
आजदेखि ‘गरुड पुराण’ प्रदर्शनमा